talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: June 2010
မိဘတို့သည် သားသမီးအပေါ်တွင် မည်မျှကောင်းကြောင်းကို ထင်ရှားစေသောစာသားများဖြစ်သည်။
အချို့သော သားသမီးတို့သည် မိဘကို ပစ်ပယ်၍ ဘိုးဘွားရိပ်သာ သို့ပို့ထားကြသည်။ အချို့ သော
သားသမီးများက မိဘတို့ကိုစော်ကားကြသည်၊ ထိုသို့သာ သားသမီးများက မိဘကိုစော်ကားနေလျှင်
ငရဲရောက်မည်မှာ ဧကန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မဖြစ်ရလေအောင် လူတိုင်းသိရှိပြီးလိုက်နာနိုင်ရန်ရေးသား
၃။ မိဘသည် ရပ်ဝေးတွင် စီးပွားရှာ၍ သားသမီးကိုကျွေးမွေးသည်။သားသမီးကလည်း
ထိုသို့ ပြန်လည် လုပ်ကျွေး ထိုက်သော အာဟုနေယျ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
၁၂။ ကိုယ်သုံးဖို့ ရှာထားသောပစ္စည်းကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်မသုံးရက်၊မစားရက်အောင် သားသမီး အတွက် ချန်ထားသောကြောင့် ရသော ဂုဏ်ကို ဂေါပယန္တိဟုခေါ်သည်။
Posted by talwinsuccess at 10:02 PM0comments
ဗုဒ္ဓါ အနုန္နာ မရိယာ သုသင်္ခေယေ ။
(ဗုတ်ဓါ အနန်နာ မရိယာ သုသင်ခယေ ။ )
ဗုဒ္ဓါ အနုန္နာ သုဟလာ ဓိသင်္ခေယေ ။
(ဗုတ်ဓါ အနန်နာ သုဟလာ ဓိသင်ခယေ။ )
ဗုဒ္ဓါ ရိယောဃေ ပကု လက္ခကပ္ပကေ။
(ဗုတ်ဓါ ရိယောဃေ ပကု လက်ခကပ်ပကေ။)
ဝန္ဒာမိ တေ ဇိရနိရက္ကမေ အဟံ။
(ဝန်ဒါမိ တေ ဇိရနိရက်ကမေ အဟံ။)
သုသင်္ခယေ - ဘုရားအဖြစ် ပါရမီိပုည ဖြည့်ခဲ့ရသော ခုနှစ်သင်္ချေတွင်း ၊
အနုန္နာ မရိယာ - ဗြဟ္မဒေဝ ဘုရားစလျက်ရေတွက်ရကိန်း တစ်သ်ိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်ကုန်သော၊
ဗုဒ္ဓါ -သုံးလူ့ သခင်ဘုရားရှင်တို့ သည် ၊ ဥပ္ပဇ္ဇိံသု - ပွင့်တော်မူကုန်ပြီ။
ဓိသင်္ခယေ - နှုတ်တော်မြွက်ကာပါရမီယုတ်မြတ်ဖြည့်ခဲ့အပ်သော ကိုးသင်္ချေတွင်း၊
အနုန္နာ သုဟလာ - ဂေါတမလျှင် အစတည်လျှက် စဉ်ရေတွက်သော် သုံးသိန်းရှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်ကုန်သော။
ဗုဒ္ဓါ -သစ္စာသိမြင် ဘုရားရှင်တို့ သည် ၊ ဥပ္ပဇ္ဇိံသု - ပွင့်တော်မူကုန်ပြီ။
ဃေ -ပါရမီဆယ်ထွေ ဖြည့်ခဲ့ပေသော လေးဖြာမည်ရင်း သင်္ချေတွင်း ၊
ရိယာ - တစ်ကျိပ် နှစ်ဆူကုန်သော၊ ဗုဒ္ဓါ - ဘုရားရှင်တို့ သည်၊ ဥပ္ပဇ္ဇိံသ္ဇု - ပွင့်တော်မူကုန်ပြီ။
လက္ခကပ္ပကေ - ကမ္ဘာတစ်သိန်းတွင်း၊
ပကု - ပဒုမုရဘုရားမှ ဂေါတမတိုင် ရေတွက်ခဲ့သော် တစ်ကျိပ်ခြောက်ဆူကုန်သော၊
ဗုဒ္ဓါ - ဘုရားရှင်တို့ သည် ၊ ဥပ္ပဇ္ဇိံသု - ပွင့်တော်မူကုန်ပြီ၊
တေဇိ၇နိရက္ကမေ - တစ်သိန်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့ ကို၊
အဟံ - အကျွန်ုပ်သည် ၊ အာဒ၇ံ -ရိုသေစွာ၊ ဝန္ဒာမိ - ရိုသေပန်ထွာ ရှိခိုးပါ၏။
ဤကား သက်တမ်းရင့်သီဟိုဠ်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ပေတည်း ။ ။
Posted by talwinsuccess at 9:57 PM0comments
(က) သမ္ဗုဒ္ဓေ အဌဝီသဉ္စ ၊ သဗ္ဗတေဇံ သဗ္ဗဂုဏံ။
(သမ်ဗုတ်ဓေ အတ်ထဝီသင်စ၊ သပ်ဗတေဇံ သပ်ဗဂုဏံ။)
(သပ်ဗသုခံ လဘတု မေ။)
ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။
(ဆဝိဆာယာ ဆယီစ ဆာယာ။)
(ခ) ပဉ္စဗုဒ္ဓါ မဟာတေဇံ၊ သဗ္ဗညုတ ဥာဏဝရံ ။
(ပင်စဗုတ်ဓါ မဟာတေဇံ၊ သပ်ဗညုတ ညာဏသရံ။)
သဗ္ဗသတ္တရှု သဗ္ဗဘယာ၊ ဝိနဿန္တု အသေသတော။
(သပ်ဗသတ်တရူ သပ်ဗဘယာ၊ ဝိနတ်သန်တု အသေသတော။)
(က) သဗ္ဗတေဇံ - ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တို့ နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော၊ သဗ္ဗဂုဏံ - ဂုဏ်တော်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော၊
အဋ္ဌဝီယံ - နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူကုန်သော၊ သမ္ဗုဒ္ဓေစ - လေးသစ္စာမှန် ဥာဏ်ရောင်လျှံဖိတ်
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ ၏ ။ အာနုဘာဝေန -အာနုဘော်ကြောင့် ၊ မေမမ- ဘုရားတပည့်တော်အား ၊
သဗ္ဗသုခံ- ချမ်းသာမှုအလုံးစုံကို ၊ လဘတု - မုချမသွေ ရရှိပါစေသတည်း။
(ခ) သဗ္ဗညုတ ဥာဏဝရံ - သိစရာအမှန် တစ်စမကျန် သိမြင်တော်မှုပေထသော၊ မဟာတေဇံ- ကြီးကျယ်သော တန်ခိုးဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မှုသော၊ ပဉ္စဗုဒ္ဓါ- ဘဒ္ဒကမ္ဘာ ပွင့်တော်မူမည့်ငါးဆူသောဘုရားရှင်တို့ ၏၊ အာနုဘာဝေန- တန်းခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်အားဖြင့် ၊ သဗ္ဗသတ္တရူ- ခပ်သိမ်းသော ရန်အပေါင်းတို့ သည်၊ သဗ္ဗဘယာ- အလုံးစုံသော ဘေးအပေါင်းတိုိ့ သည်၊
အသေသတော- ကြွင်းကျန်တစိ မရှိသောအားဖြင့်၊ ဝိနဿန္တု- ကင်းစင်လွင့်ပျောက်ပါစေသတည်း။
Posted by talwinsuccess at 9:55 PM0comments
သမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားရှိခိုးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၊ခလေးတိုင်း လိုလိုပင် ကြားဖူးကြ၊ အာဂုံ ဆောင်နိုင်ကြသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်သောဂါထာတော်ပေတည်း ။
သို့သော် အနက်အဓိပ္ပါယ်သိသူကား နည်းလှ၏။ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသိမှသာလျှင် ပိုမို ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားစေနိုင်ပေမည်။ သိစေ၊၇ွတ်ဖတ်ပူဇော်စေလိုသောစေတနာဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ လိုအပ်မှု၊ မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက လမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါသည်။ ယခုလူတိုင်း လိုလိုကြားဖူးကြသော တောင်ကျွန်းသမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို ပဏာမ တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
သမ္ဗုဒ္ဓေ (၆)မျိုး ရွတ်ဆိုရခြင်းအကျိုးသွား
သမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားရှိခိုးသည် အန္တရာယ်က ကင်းရှင်း ဘေးရန်မှန်သမျှဝေး၏။ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှလွင့်စင်၏။
မိမိ၏စီးပွား၊သားမယား၊ စည်းစိမ် အိုးအိမ်ဥစ္စာ၊ အသက်ဇိဝိတိနြေ္ဒ ရန်အပေါင်းမှပယ်ရှင်း၏။
သူခိုး ဓါးပြများလုယက်၊တိုက်ခိုက်မှုမှကင်းရ အချုပ်၊နှောင်အဖွဲ့ ၊ ထောင် ၊ ရုံး ၊ ဂတ် ၊
အမှုအခင်းဘေးမှလွတ်မြောက်၏။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်ရခြင်း၊ ကောင်းသောအိမ်မက်
မက်ခွင့်ရခြင်း စသောအကျိုးများသည် မန္တန်၏ စွမ်းပကားဖြစ်၏။
သမ္ဗုဒ္ဓေ အဌဝီသဉ္စ ဒွါဒသဉ္စ သဟဿကေ
ပဉ္စသတ သဟဿာနိ၊ နမာမိသိ၇သာမဟံ
ံအပ္ပကာဝါဠုကာ ဂင်္ဂါ ၊အန န္တာ နိဗ္ဗုတာ ဇိနာ။
တေသံဓမ္မဉ္စ ၊ သံဃဉ္စ၊အာဒေ၇န နမာမဟံ ၊
နမက္ကာ၇ာ နုဘာဝေန ၊ဟိတွာ သဗ္ဗေဥပဒ္ဒဝေ ၊
အနေက အ န္တ၇ာ ယာပိ၊ဝိနဿန္တု အသေသတော။
အဌဝီသံ - သုံးပါးဘဝ သုံးလောကတွင် ဥာဏေ၇ာင်ဖိတ် အောင်ဘိသိက် နှင့် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူကုန်သော၊ သမ္ဗုဒ္ဓေစ-တန်ဆောင်ပမာ ဥာဏ်ေ၇ာင်ဝါဖြင့်သစ္စာ ပွင့်လင်း တ၇ား မင်း တို့ ကို လည်း ကောင်း၊
ဒွါ ဒသဉ္စ သဟဿကေ - နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်းစက်မွေ့ လျောင်းသည့်တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကုန်သော
သမ္ဗုဒ္ဓေစ -လေ၇ာင်ပမာဥာဏ်ေ၇ာင်ဝါဖြင့် သစ္စာလင်း ထိန် မြတ် မု နိန် တို့ကို လည်း ကောင်း ၊
ပဉ္စသတ သဟဿာနိ- သောင်းတိုက်စကြာဝဋ္ဌာ ဂုဏ်ဝါရောင်ရှိန်း ငါးသိန်းကုန်သော၊
သမ္ဗုဒ္ဓေ စ- နေရောင်ပမာ ဥာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းပြောင် မြတ်မုနိန်တို့ကို လည်းကောင်း၊
အဟံ-အကျွန်ုပ် သည် ၊သိ၇သာ - ဦးခေါင်း ၇တနာ မြတ်အင်္ဂါ ဖြင့်၊ နမာမိ - ရိုသေညွတ်ကျိုး လက်စုံ မိုး ၍ ရှိခိုး ပါ၏ ။
ဂင်္ဂါ-ဂင်္ဂါယ- ဂင်္ဂါ မြစ်တွင်း ၌၊ဝါဠုကာ -ရှိကြကုန် သောသဲ တို့သည်။အပ္ပကာ -နည်း ကြ ကုန်သေး၏ ။ နိဗ္ဗုတာ - ဘုံ ဇာတ် သိမ်း ၍ ငြိမ်း အေး တော် မူကြ ကုန်ပြီးသော၊ဇိနာ-နှောင့်ယှက်ဖန်လာမာ၇်ငါးဖြာကို
အ၇ိယာ မဂ် ဘုန်းေ၇ာင် စက် ဖြင့် ချိုး ဖျက်လွယ် ကူ အောင်တော် မူသော ဘု၇ားရှင် အပေါင်းတို့ကား၊
အန န္တာ - သင်္ချာ ဂဏန်းေ၇ တွက်မှန်း လည်း ဆုံးခန်းတိုင်မြောက် မေ၇ာက် နိုင်ကြကုန်။
တေဇိန စ - ထို ဘု၇ား ရှင် တို့ ကိုလည်းကောင်း ၊
တေသံ - ထိုငါးသိန်း တစ်သောင်း နှစ်ထောင် နှစ်ကျိပ် ရှစ် ဆူ ကုန်သော၊ဘု၇ား ရှင် တို့၏ ၊
ဓမ္မဥ္စ-တ၇ားတော်မြတ်ကို လည်းကောင်း၊သံ ဃဥ္စ -တပည့်သား သံ ဃာတော်မြတ်ကိုလည်းကောင်း ၊
အဟံ - အကျွန်ုပ်သည်၊အာဒေ၇န အာဒ၇ံ- ရိုသေစွာ၊နမာမိ - ရိုသေညွတ်ကျိုးလက်စုံ မိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ ။
နမက္ကာရာနုဘာဝေန- ရှိခိုးကန်တော့ရသော ပဏာမ ကုသိုလ်ကံ စေတနာတို့ ကြောင့်၊
သဗ္ဗေ- အလုံးစုံကုန်သော၊ ဥပဒ္ဒဝေ- ဥပဒ္ဒဝေါတရားတို့ ကို၊ ဟိတွာ -ပယ်ဖျောက်၍်
အနေကအန္တရာယာပိ- များပြားလှသော အန္တရာယ် အပေါင်းတို့ သည်လည်း၊ အသေသတော-ကြွင်းကျန်တစိမရှိသောအားဖြင့်၊ ဝိနဿန္တု - ကင်းစင် လွင့်ပျောက်ပါစေသတည်း။
Posted by talwinsuccess at 9:51 PM0comments
မေတ္တာပွားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ မြင်ရမမြင်ရသတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ အေးမြတယ်၊ နတ်များလည်း အချင်းချင်း ချစ်ခင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည် ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်ကြည်.ပါ။
Posted by talwinsuccess at 11:55 AM0comments
ရှင်ရဲ့ တရားတော်အားနာကြားပြီး ရှေ့တော်မှာတင်ကျွတ်တမ်းဝင် နိဗ္ဗန်စံရမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
အရဟတ္တဖိုလ်ဈာန်သမာပတ် ဝင်စားပြီး အဇိတရဟန်းနောင် အနာဂတ်ကာလမှာ
ခြေတော်ချတိုင်းချတိုင်း ကြာပွင့်တွေပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ ဖွားလျှင်ဖွားချင်း
ခုနစ်လှမ်းလှမ်းပြီး “ယခုဘဝကား ငါ့အဖို့နောက်ဆုံးဘဝတည်း
နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့ပြီ အာသဝေါကင်းသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငြိမ်းအေးလတံ္တ့” ဟူသောစကားကိုအရပ်လေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ခုနစ်ထောင်စီဆိုတော့ ပြာသာဒ်လေးဆောင်ဆိုရင် တိုက်ခန်းပေါင်း ၂၈၀၀၀ ရှိမယ်။
မြေကြီးနဲ့အမျှအောက်မြေကြီးအဆုံးထိ သုံးလို့မကုန်ဘူး။ ဒါတင်မကသေးဘူး ရွှေအိုးတစ်လုံးစီမှာ ပဒေသာပင်ကြီးခြောက်ပင်စီ ပေါက်လိမ့်မယ်။
မောင်းမပေါင်းတစ်သောင်းခြောက်ထောင်က ဆိုတီးမှုတ်ဖြေဖျော်ဖို့ရာ ကချေသည်အမျိုးသမီးခုနစ်ထောင်တို့ဖြင့်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။
စန္ဒမုက္ခီအမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုလိမ့်မည်။ စန္ဒမုက္ခီအမျိုးသမီးကလည်း သူမတူ နတ်သမီးတမျှအလွန်လှပပြီး သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ကား
အဇိတမင်းသားပျော်အောင်ဆိုပြီးတော့ ရှစ်သောင်းလေးထောင်သော ကချေသည်တွေမြို့သူ မြို့သား နိဂုံးဇနပုဒ်သူ မင်းသားမင်းမြေး သူဌေး
အပြည့်အလျှံခြံရံခစားနေကြလိမ့်မယ်။ လူ့ဘဝ ကာမဂုဏ်ထဲမှာပျော်အောင်ဖြေဖျော်နေကြတာ။
နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသား မြို့သူမြို့သားတွေ တောရွာဇနပုဒ်က လူတွေ မင်းသား
မင်းမြေး သူဌေး သူကြွယ်အစရှိတဲ့ လူပေါင်းများစွာနှင့်တကွ စန္ဒမုက္ခီ သားတော်
ဗြဟ္မာဝံသ အလုပ်အကျွေးကချေသည်တွေရော အဇိမင်းရဲ့ ပြာသာဒ်ထဲမှာ
နတ်ဗြဟ္မာတို့ တန်ခိုးတော်ကြောင့်လည်းကောင်း ဟသာင်္မင်းပျံသကဲ့သို့
စန္ဒမုက္ခီမိဖုရားက အဲဒီနေရာမှာပဲ နတ်သြဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့
နေဝန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီး သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကိုရမယ်။
ပွင့်ကြတဲ့ ကံ့ကော်ပွင့်တွေဟာ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကျမှ ကြွေကြတော့မှာ။
အဲဒီကံ့ကော်ပင်ကို ဘယ်ငှက်မှ မနားဝံ့ကြဘူး။ ဖြတ်ကျော်မပျံ့ဝံ့ကြဘူး။
ကံ့ကော်ပင်းနားရောက်တဲ့ငှက်တိုင်း သတ္တဝါတိုင်း ကံ့ကော်ပင်ကို လက်ယာရစ်သုံးပတ်ပတ်ပြီးမှ သွားကြလိမ့်မယ်။
အလေးပြုညွှတ်တွားကိုင်းရှိုင်းလာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လောကဂရု ယူလိုက်တာလို့ခေါ်တယ်။
ဘုရားရှင်၏တန်ခိုးတော်ကြောင့် ရွှေပန်းဆိုင်း ငွေပန်းဆိုင်း ပုလဲပန်းဆိုင်း
သန္တာပန်းဆိုင်းတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်လျက် ရတနာခုနစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံပြီး
ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောသည့်နေ့မှစပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံသည့်တိုင်အောင် နေ့ညအမြဲပင်လိုက်ပါပြီး မျက်နှာကျက်အဖြစ် မိုးကာပြီးနေမယ်။
မရဘူး။ မကြားချင်လို့နားပိတ်ထားလည်းမရဘူး။ ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့်
၃၁ ဘုံအကာအရံမရှိ ဖီလာထုတ်ချင်းပေါက်မြင်ကြရမှာ။ အပေါ်ကြည့်ရင် နတ်သား
နတ်သမီး ဗြဟ္မာတွေမြင်ရမယ်။ အောက်ငုံ့ကြည့်ရင် ငရဲပြည်မှာ ခံစားနေရတဲ့
အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့် ယောကျာ်းဆိုရင် နတ်သားလို မိန်းမဆိုရင် နတ်သမီးလို ချောမောလှပတွေချည်းဖြစ်ရာ ရုပ်မချော
စားစရာပဒေသာပင်တွေမှာ ယူစားချင်တဲ့အချိန်ယူစားလို့ရတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာရောဂါမှကိုမရှိဘူး။
ပရိသတ်တို့ကို ချေချွတ်တော်မူပြီးလျှင် အနှစ်ရှစ်သောင်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် သာသနာတော်က အနှစ်နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း
ပြည့်တဲ့အခါ ဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးသည် အချိန်တန်လျှင် သာသနာပျက်ပြီး
အဲဒီ မဏ္ဍကမ္ဘာမှာဘုရားနှစ်ဆူပွင့်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါ သာရကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်ပြီး အဘိဘူဘုရားတစ်ဆူသာပွင့်လိမ့်မယ်။
သာရကမ္ဘာပျက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်သိန်းဘုရားမပွင့်ဘဲနေပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျော်လွန်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကမ္ဘာများမှာ
အစိုးရ၍ လူကောင်း နတ်ကောင်း စည်းစိမ်ကောင်းကို ခံစားရပြီး
ကျွန်ုပ်ဘုရားဖြစ်သောအခါ ရှေးဦးစွာ ဖူးတွေ့ရ၍ ပဋိသမ္ဘိဒါပညာလေးပါးနှင့်တကွ
ရဟန္တာအဖြစ်ကို မချွတ်မလွဲရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ရှင်မာလဲမထေရ်မြတ်အား
Posted by talwinsuccess at 11:50 AM0comments
သင့်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး (မပြီးသေးသော အစိတ်အပိုင်းများအပါအ၀င်)ကို
ဆင်းရဲ ချမ်းသာမပါသော ချစ်ခြင်းဖြင့်ချစ်ခင်သူ
သင့်ဘ၀မှာ သူရှိနေသည့်အတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေသူ
Posted by talwinsuccess at 2:41 PM0comments
Posted by talwinsuccess at 12:25 PM0comments
ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါသ ထိန်းချုပ်ဖို့ အကျိုးရှိမဲ့ အကြံပြုချက်တွေတော့ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်
ယောက်က သင့်ကို ကားလမ်းကြောင်း ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ဒေါသထွက်တာ
ခံစားဖူး ပါသလား။ သင့်သားသမီးက သင်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်မပေးခဲ့ရင်
တွေးတွေးပြီး ဒေါသ ပေါက်ကွဲ ဖူးပါသလား။
ဒေါသဆိုတာ ပုံမှန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကောင်းမြင်ပြီး တိုးတက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းကို ဘယ်လို သိနိုင်ပါ့မလဲ။
ထိန်းချုပ်မှု မရှိတဲ့ ဒေါသဟာ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား သူစိမ်းတွေနဲ့ ဒေါသ ဖြစ်စရာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာရင် ဒေါသ ကင်းဝေးရေး
အတွက် လုပ်ရမယ့် ပင်ကိုယ် စွမ်းရည်ကို အသုံးချဖို့ အချိန် ရောက်ပြီဆိုတာ
သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါသ ကင်းရေး ၁၀ ချက်ဆေးဟာ သင့်ရဲ့ ဒေါသတွေကို
ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်း အဖြစ် အသုံးပြုဖို့
(၁) ခတ္တခဏ အချိန်ယူ တတ်အောင် လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တစ်ဖက်သားကို ခွန်းတုံ့ မပြန်ခင် ၁ ကနေ ၁၀ အထိ လက်ချိုးရေ တွက်လိုက်ပါ။
(၂) ကာလလေး တစ်ခု လုပ်တတ် အောင်လုပ်ပါ။ ခံပြင်းစရာတွေကို သက်သာခွင့် ရတဲ့အထိ ဒေါသကို တအောင့်လောက် ထိန်းလိုက်ပါ။
(၃) စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဒေါသကို ရင်ဖွင့် ပြောပြတတ်အောင် လုပ်ပါ။ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တဲ့ နည်းကို မသုံးဘဲ သင့်ရဲ့
ခံပြင်းမှု၊ မချင့်မရဲ ဖြစ်မှုကို ထုတ်ဖော် ပြောပြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာ
ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အခြေ အနေကို ပိုလို့ ဆိုးရွား
(၄) လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါ။ ကာလ လှုပ်ရှားမှု လုပ်တာဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တွေအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ သေချာ ပါတယ်။
အထူး သဖြင့် ဒေါသ ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲ အချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်း
ပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြေးလိုက်၊
ဒါမှမဟုတ် ရေကူးလိုက်၊ ဒါမှ မဟုတ် အလေးမလိုက်ပါ။
(၅) တစ်ခုခုမပြောခင် အသေအချာ စဉ်းစားပါ။ မစဉ်းစားမိဘဲ ပြောမိမယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်လာပြီး ရန်များဖို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ သင်ပြောချင်တာကို လက်ရေးနဲ့ ချရေးလိုက်ပါ။ ဒီလို
လုပ်လိုက်တာနဲ့ ပြဿနာ တွေကို ပြီးအောင် လုပ်နိုင်ပြီး ဒေါသ ထွက်တဲ့အခါ
လမ်းကြောင်း ပြောင်းတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။
(၆) ပြဿနာ တွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကို ကယောက် ကယက် လုပ်တဲ့အပေါ် အာရုံစိုက်မဲ့အစား၊ အဓိက ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဒေါသ
ထွက်အောင် လုပ်တဲ့သူနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၇) ပြဿနာကို ထုတ်ဖော်တဲ့ အခါမှာ ‘ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ’ ဆိုပြီး သုံးနှုန်း ပြောဆိုပါ။ ဒီလို သုံးနှုန်း ပြောဆို လိုက်တာနဲ့ ဝေဖန်တာတို့၊
အပြစ်တင်တာ တို့ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပါ။ သူတစ်ပါးကို ဒေါသ
ဖြစ်အောင်လုပ်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် မကျေမချမ်း အောင် လုပ်တာတွေကို ရှောင်ရှား
စိုးရိမ် ပူပန်မှု၊ အားပြိုင်မှုတွေ မရှိလာ နိုင်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ- ‘ကျွန်တော့် အိမ် အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား တကယ် ကူညီ သင့်တယ်ဗျာ ’ လို့
ပြောမယ့်အစား ‘ကျွန်တော် စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ .. ဒီညနေကျတော့ အိမ်
အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား ကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး’ လို့
(၈) သဝန်တို၊ မနာလိုတာတွေ မလုပ်ဖို့ပါ။ တကယ်လို့ သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင် နှစ်ဦးစလုံး အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ သင်လိုချင်တဲ့
အတိုင်း လူတိုင်းကို အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံဖို့ မျှော်လင့်ထားတာ သဘာဝ
(၉) စိတ်ဖိစီးမှုကို ရယ်စရာ ဟာသလုပ်ပြီး ချေဖျက် ပစ်လိုက်ပါ။ ရယ်စရာ လုပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ပင်ပန်း ညစ်နွမ်းမှုကို ပျံ့နှံ့အောင်
လုပ်လိုက်သလို ပါပဲ။ စောင်းချိတ်တဲ့ စကားထေ့လုံး ငေါ့လုံးတွေ မပြောမိဖို့
အရေး ကြီးပါတယ်။ ဒီလို ပြောလိုက်မိတဲ့ အတွက် ခံစားချက်တွေကို
နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရာ ခပ်သိမ်းကို ပိုဆိုး ရွားစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) အပန်းဖြေ အနားယူတဲ့ အလုပ်ကို လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူဖို့ စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချခြင်းဟာ သင့်ဒေါသကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှု
လေ့ကျင့်ခန်းကို များများ လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူတဲ့ မြင်ကွင်းကို
တွေးကြည့်ကြည့်ပါ။ ညင်သာတဲ့ စကားလုံးတွေကို ထပ်တလဲလဲ တွေးကြည့်ပါ။
ဥပမာ - သက်သက် သာသာနေပါ။ ဒေါသကို လျှော့ဖို့ တခြား ခိုင်မာတဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ သီချင်း နားထောင်ပါ။ စာများများ ရေးပါ။ ယောဂ ကျင့်ပါ။ လူတိုင်း
နီးပါးတော့ ဒေါသ ဖြစ်ဖူး ကြမှာပါ။ ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့။
ဒေါသကို ပေါက်ကွဲ ထွက်လိုက်ရင်ပဲ ကျွန်မလည်း စိတ်ချမ်းသာ သလိုလို၊ ဒေါသကို မြိုသိပ်လိုက်တာက ကောင်းသလိုလို၊ ပင်လယ် ကမ်းခြေသွားပြီး အော်ဟစ်
ခိုင်းလိုက်ရင်ပဲ ဒေါသ ပြေသွား သလိုလို၊ တောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီး အော်ရင်ပဲ
ရင်ထဲမှာ ပေါ့သွားသလိုလို အဲလို သလိုလို တွေကြားထဲမှာ ဒီနည်းလမ်းလေးကို
သုံးကြည့်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တာနော်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်တဲ့သူတွေ
အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးမိသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 8:31 PM0comments
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး အမေ့ဆုံးသော အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အခြား မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်း ဆိုတာပါပဲ။ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို ဆပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ကလေးဘ၀ ကတည်းက ပုံပြင်တွေ၊ ကဗျာတွေ၊ အမျိုးမျိုး သင်ခဲ့ကြပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် အခုချိန်ထိ မိဘ ကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့ အကောင်အထည် မဖေါ်ကြတာလဲ??၊ မေ့လျှော့ ပေါ့ဆ နေကြတာလဲ??၊ မမေ့လျှော့တဲ့ သူတွေကရော ဒါလေးလုပ်ဖို့ကို ဘာကြောင့် ရေးကြီးခွင့်ကျယ် လုပ်နေကြရတာလဲ??။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖက်က ပြည့်စုံမှ ဆပ်မှာလား?။ အဲဒီလို လုပ်လို့တော့ မရပြန်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့က တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်လာပြီး ပြည့်စုံလာတယ် ပဲထားအုံး မိဘတွေရဲ့ အသက်ကရော၊ ရပ်နေမှာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့တွေလည်း အသက်တွေ ကြီးလာမှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ပြင်နေရင်းနဲ့ပဲ မဆပ်လိုက်ရတဲ့ သားသ္မီးတွေလည်း တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။ မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင် တစ်ဦးသာ ရှိတော့တဲ့သူတွေ ဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အလေးအနက် ထားသင့်ပါတယ်။ မိဘထက် အရေကြီးတဲ့သူ၊ မိဘထက် ကျေးဇူးကြီးတဲ့သူ ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါ့မလား။ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ အခွင့်အရေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းတွင်မှာ သန္ဓေ စပြီး တည်ကတည်းနေ အခုချိန်ထိ မိဘဆီက မှီခိုမှု ကင်းအောင် ဘယ်လောက် နေနိုင်ပြီလဲ။ အခုချိန် ချွတ်ခြုံကျသွားရင်ရော မိဘကလွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူကများ လက်ခံမှာတဲ့လဲ..........။
Posted by talwinsuccess at 7:22 PM0comments